# Fetin’ny paska. Olona 35 nosamborina, 5 notanana. Nanao hetsika ny avy ao amin’ny polisim-pirenena tamin’ny fetin’ny paska 2014. Vokatr’izany dia nisy olona 35 no nosamborina tamin’izany ka ny 20 ny alahady ary ny 15 kosa ny alatsinainy. Nisy tamin’izy ireo voatery notanana any amin’ny “violon”. Nisy ny tsy nanana karapanondro. Ao koa anefa nosamborina vokatry ny hamamoana be loatra narahana fanakorontanana.
# Itaosy. Lehilahy matin’ny herinaratra. Lehilahy iray no fantatra fa matin’ny herinaratra, omaly teny Bemasoandro Itaosy. Nanamboatra trano izy io ka niakatra ambony. Ny voavao no nahalalana fa nisy zavatra saika horefesina tamin’izany. Tsy mba hazo anefa no nampiasainy fa vy. Asa na tsy hitany fa nisy taribihy misy herinaratra tsy lavitra azy. Nahazo ilay taribihy ny vy teny aminy. Tonga dia natsipin’ny “courant” izy ary nianjera tamin’ny tany. Novonjena nentina hopitaly nefa teny an-dalana dia tsy tana ny ainy.
# Andralanitra. Vehivavy maty voahosin’ny “camion”. Vehivavy lehibe iray no maty voahosin’ny kodiarana “camion” mpanary fako teny Andralanitra afak’omaly. Ireny olona mitsindroka eny amin’ny fanariam-pako ireny ity vehivavy ity. Ny voavao no nahalalana fa natory izy. Tsy hitan’ny mpamily mihitsy anefa ka izany no nitetezan’ny kodiarana ny tratrany.
# Ankaraobato. Mpitarika sarety maty nidona tamin’ny pôtô. Omaly antoandro, mpitarika sarety iray no maty tsy tra-drano nidona tamina pôtô teny Ankaraobato. Ny vaovao no nahalalana fa dimy izy ireo no niaraka nitondra sarety nisy entana. Nidina iny fidinam-be avy eo. Tsy fantatra izay niseho fa toa hoe nialan’ireo namany efatra ity lehilahy 34 taona ity. Izy irery araka izany no nirimorimo nidina. Tsy voatana ilay sarety ary dia nifatratra tany amin’ny pôtô. Tery tao izy ary izany no nitarika ny fahafatesany.
# Ambohibao. Nirehitra ny trano nefa tsy tao ny tompony. Nandeha naka rivotra tany Toamasina, raha araka ny fantatra ny tompon-trano sy ny fianakaviany. Nirehitra anefa ny trano noho ny “court-circuit”. May tanteraka ny rihana voalohany sy ny entana rehetra tao anatiny, raha araka ny fanazavan’ny mpitandro ny filaminana.